Myanmar Dev Jobs Freelance Web Developer ကိုနိုင်ဝင်းနှင့်အင်တာဗျူး
? MyanamrDevJobs - အစ်ကိုအနေနဲ့ဘာက Programmer စလုပ်ဖို့ဖြစ်လာသလဲဗျ... အစ်ကို Programmer လုပ်ဖို့စဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ပြန်ပြောပြပေးပါဦး…
? ကိုနိုင်ဝင်း - အင်း . တကယ်တော့ ကျွန်တော် ၁၀ တန်းအောင်တာက ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဗျ အဲ့ချိန်ထိ computer ဆိုတာမြင်တောင်မမြင်ဘူးခဲ့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ကျောင်းလျောက်တော့ ဦးစားပေးလျောက်ထားတဲ့ DSA ကျောင်းကလဲအရွေးမခံရတဲ့အပြင် ဒုတိယဦးစားပေးလျောက်တဲ့ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ကလဲ စစ်တွေမှာပဲတက်ရမယ် ရန်ကုန်ကို ပြန်ပြောင်းလို့မရခဲ့ဘူး။ အဲ့တော့ ရန်ကုန်မှာပဲနေချင်တာနဲ့ ဘာတက်ရင်ကောင်းမလဲ စုံစမ်းရင်း IDCS တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ကနေ computer နည်းပညာကို စတင်စိတ်ဝင်စားပီး Programmer ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ် စဝင်ခဲ့တာပါ။
? MyanamrDevJobs - အစ်ကို Programming စလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သင်တန်းတက်ခဲ့လဲဗျ... အစ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့သင်တန်းရှိရင်သင်တန်းရှိရင်သင်တန်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦး။
? ကိုနိုင်ဝင်း - ကျွန်တော့ခရီးက နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ဗျ။ ပထဦးဆုံး တက်တာက IDCS Diploma ကို KMD မှာတက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါက တစ်နှစ်ကြာပါတယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ A+ နဲ့ Network ပိုင်းကို KMD မှာပဲ ခြောက်လလောက်တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ နယ်ပြန်ရောက်သွားပြီး အလုပ်လုပ်လိုက်တာ ၃ နှစ်လောက်အဆက်ပြတ်သွားတယ်။ ၂၀၁၂ မှာမှရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လာပီး Gusto မှာ Programming Basic နဲ့ Advance ကိုပြန်တက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါပီးတော့ Myanmar Links မှာ Web Development Foundation နဲ့ Advance ကိုဆက်သင်ပါတယ်။ အဲ့သင်တန်းနှစ်ခုက ကျွန်တော့အတွက် အများကြီးအထောက်အကူပြု တိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။
? MyanamrDevJobs - အစ်ကိုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ သုံးနေကြ tools တွေ technology တွေ အကြောင်း အနည်းနည်း ပြောပြပါဦး
? ကိုနိုင်ဝင်း - Text Editor ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း Sublime Text ပဲ၊ Dev Env အတွက်တော့ Mac မှာဆို Valet သုံးပြီး Ubuntu မှာတော့ LAMP သုံးပါတယ်။ Database ကတော့ MySql ကိုပဲသုံးဖြစ်တာများတယ်။ အဓိကသုံးတဲ့ technology တွေက Laravel, VueJS နဲ့ Frontend UI အတွက် Bootstrap စတာတွေကိုသုံးပြီးလုပ်ပါတယ်။
? MyanamrDevJobs - အခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ programmer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အစ်ကို ဘာတွေ လုပ်ချင်လဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါဦး
? ကိုနိုင်ဝင်း - ခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ပုံစံက ဒီထက်ပိုဂျွတ်တဲ့ programmer တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ထက် အသစ်အသစ်တွေထွက်နိုင်လွန်းတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ဖို့ရယ်၊ နည်းပညာနဲ့မဆက်နွယ်တဲ့ အပြင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်ဖို့ပဲကြိုးစားနေပါတယ်။
? MyanamrDevJobs - အစ်ကိုအနေနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလေ့လာလဲဆိုတာလေးကော sharing လုပ်ပေးပါဦး ?
? ကိုနိုင်ဝင်း - ထွက်သမျှတိုင်းကိုတော့ လိုက်လေ့လာမနေဘူးဗျ။ လက်ရှိသုံးနေတာနဲ့လဲ တွဲသုံးနိုင်တယ်၊ အဲ့ဒါကိုသုံးလိုက်ခြင်း အားဖြင့် ဘာတွေပိုကောင်းလာနိုင်သလဲ၊ ဘာတွေပိုလုပ်လို့ရနိုင်လာသလဲ ကြည့်ပီးမှ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ project တစ်ခုမှာစမ်းသုံးကြည့်ပီးလေ့လာပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ် ဒီဇိုင်းကာလာအနေအထား ဘာညာ hot လာတဲ့ နည်းပညာဆိုရင်တော့လဲ သီးခြားလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းပညာအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ tutorials တွေထက် official doc ဖတ်ပြီး project လုပ်ကြည့်ရင်း လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
? MyanamrDevJobs - အခုတစ်လောဖတ်ဖြစ်တဲ့ Programming စာအုပ်တွေ... နောက်ပိုင်းဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါ့လားဗျ…
? MyanamrDevJobs - အစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ Top techonology တစ်ခုခုလောက်ပြန် share ပေးပါဦး...
? ကိုနိုင်ဝင်း - Internet of Things (IoT) ပါ။
? MyanamrDevJobs - အခုမှ Programmer စလုပ်မယ့်သူတွေ... အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အစ်ကိုအတွေ့အကြုံထဲက share ဖို့အကောင်းဆုံးထင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလောက် share ပေးပါ့လား
? ကိုနိုင်ဝင်း - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာမှမသိသေးမတတ်သေးလို့လဲမယူဆပါနဲ့ ထို့အတူပဲ ငါသိ ငါတတ် ငါဆရာကြီး ဆိုပြီးတော့လဲ နေရာတစ်ကာဝင်မပါပါနဲ့။ Freelance project တွေလက်ခံပီးရေးတော့မယ်ဆို တာဝန်ကျေရမှာဖြစ်သလို ရပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆို ညှိနှုိင်းကြပါ။
? MyanamrDevJobs - အစ်ကို Programming စလုပ်တဲ့အချိန်ကနေ အခုလက်ရှိအချိန်ထိ Programming နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ငါအဲ့တုန်းကအဲ့လိုလေ့လာလိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် အစ်ကိုမှားတယ်လို့ခံစားဖူးတာလေးရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး
? ကိုနိုင်ဝင်း - အဲ့လိုမျိုးတော့သတိမထားမိဘူး။ error ရှင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ ငါဘာလို့ အစကမစဉ်းစားခဲ့မိပါလိမ့် လို့တော့ ခဏခဏဖြစ်ဘူးတယ်။ Error လဲခဏခဏတက်တာကိုး။ ?
? ကိုနိုင်ဝင်း - ကိုယ်သိတဲ့အထဲက Taylor Otwell ရယ်၊ DHH ရယ် (သူ့ကိုသဘောကျတာက သူ့နေတဲ့ life ကိုကြိုက်လို့) ပြည်တွင်းမှာဆို ကိုစေတန် ရယ်ပေါ့။
? ကိုနိုင်ဝင်း - ထူးထူးခြားခြား ကြုံတာရယ်လို့တော့မရှိဘူးဗျ။ ကိုယ့်ဘော်ဒါ ဘော်ဂျွတ်တွေနဲ့ တွေ့ပြီး ဒီးယားနေရရင်တော့ ဟာသတွေကြီးပဲ။
? MyanamrDevJobs - Programming မဟုတ်ဘဲတစ်ခြားအစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလေးတွေ ဝါသနာပါတာလေးတွေရှိလားဗျ... ရှိရင်ပြောပြပေးပါဦး..
? ကိုနိုင်ဝင်း - ကျွန်တော် မွဲဆေးတွေဖော်မိထားပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ စက်ဘီးစီးပါတယ်။